आयोगको लापरवाही : दुवै चरणमा भोट हाल्दैछन् मतदाता
मंसिर २१, २०७४| प्रकाशित १७:२१
इटहरी- इटहरीमा यस्तो दृश्य देखियो, जहाँ पहिलो चरणमा पहाडी जिल्लामा भोट हालेका मतदाताले आज पनि भोट हाल्ने 'सौभाग्य' पाएका छन्।
मंसिर १० गते भोजपुरबाट भोट हालेका भट्टराई थरका मतदाता दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आज इटहरी–४ बाट मतदान गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिए।
‘पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मैले भोजपुर पुगेर भोट हालेँ,' उनले भने, ‘दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि इनरुवामा अर्कै कामले जाँदा फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेपछि अहिले पनि भोट हाल्न पाइयो।’
संखुवासभा चैनपुरका लिम्बू थरका अर्का मतदाताले दुवै चरणमा मतदान गर्न पाएका छन्। अस्थायी ठेगाना इटहरी र स्थायी ठेगाना भोजपुर र संखुवासभा भएका उनीहरुको मतदाता नामावली दुवैतर्फ छ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा इटहरीबाट मात्रै भोट हालेका भट्टराईले यही कारण भोजपुर र इटहरी दुवै ठाउँबाट भोट हाल्न पाए। फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता गराउँदा बसाइँसराइको प्रमाणपत्र सोधे पनि नमागेका कारण यस्तो भएको उनी बताउँछन्।
भट्टराईको जस्तै अवस्था लिम्बूको पनि हो। पहाडमा पहिले नै मतदाता सूचीमा नाम भएका र पछि तराईमा पनि नामावली भएका कारण दुई पटक भोट हाल्न पाउने अरु पनि भाग्यमानी देखिएका छन्।
सुनसरीका निर्वाचन अधिकृत भक्तबहादुर भट्टराई भने अनलाइन क्रम चेकिङ नहुँदा यस्तो समस्या भएको स्विकार्छन्। ‘हामीकहाँ फोटोसहितको नामावली दर्ता गराउँदा पहिले अन्त्यै दर्ता गराएको छ/छैन भनेर क्रम चेकिङ गर्ने संयन्त्र छैन। त्यसैले यस्तो समस्या आएको होला।’
पहाड र तराई दुवै क्षेत्रमा आउजाउ गर्ने केही मतदातामा यस्तो समस्या भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। यस्तो समस्या आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन प्राविधिक त्रुटि सच्याउनुपर्ने उनले बताए।
मलेसियाका जेलमा रहेका कामदारलाई स्वदेश फर्काइदिने भन्दै लाखौंको ठगी [भिडियोसहित]
विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीको आपत्ति– फाइलिङमा सानो समस्या भयो भनेर ५ बिन्दु तल झारिदिने?
राष्ट्रपति भण्डारीबारे यस्ता १२ विवाद
आबुधाबी डाइलगले सम्बोधन गर्ला त 'कोलम्बो प्रोसेस'का एजेन्डा?
१७ दिनपछि बालुवाटार छाडे प्रधानमन्त्रीले, प्रकाशको प्रथम स्मृति दिवसमा सहभागी
दक्षिणी भियतनाममा पहिरो, १३ जनाको मृत्यु, चार बेपत्ता
वैदेशिक रोजगारीको असर : खेती गर्नदेखि सिरक–डसना बनाउनसम्म भारतीय कामदारकै भर
३ घरमा डकैती, ७ लाखको लुटपाट, ५ जना घाइते
आजदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, पहिलो पटक १०१ वर्षीया भगवतीदेवीलाई